Kwaziswa i-iPhone 8 eyayiza kubonisa i-chip ye-A11 Bionic, ekhawulezayo kwii-Smartphones | Ndisuka mac
Kwaziswa i-iPhone 8 eyayiza kubonisa i-chip ye-A11 Bionic, ekhawulezayo kwii-Smartphones
UTim Cook uthathe umthetho wenqaku eliphambili ukwazisa entsha kunye ne-iPhone ekudala ilindelwe. Emva kokusikhumbuza zonke iindaba ezazivezwe kwii-iPhones zangaphambili, nokuba ngandlela thile zibutshintshile ubomi bethu kwaye kutheni kungenjalo, ilizwe lobuchwepheshe ngokubanzi, linike ithuba UPhil Schiller.
Iifowuni ezintsha azizukusothusa ngemibala: isilivere, iSpace Grey kunye neGolide. Siphinda kwakhona ngobukhulu, siphinde sibe nee-intshi ezingama-4,7 no-5.3. Kodwa sifumana iindaba ngayo yonke enye into. Ukuqala, sinokuphuculwa kweretina umboniso we-HD, othi okokuqala ubandakanye itekhnoloji ITruetone.
Yonke itekhnoloji entsha isekwe kwinto entsha A11 Bionic, kuba njengoko siza kubona kwiintsuku ezimbalwa ezizayo ngokweenkcukacha, ifani iBionic iya kuba nguye ojongene nokuhambisa inxenye yenyani engqinisisekayo ethi i-Apple isinike yona. Iyakonyusa ii-cores ezi-6 ngokuthelekiswa ne-2 ye-iPhone 7. Njengoko sibona, akukho nto iyirhalela le chip entsha ye-iPhone 8 ngama-25% ngokukhawuleza kunangaphambili kwaye ama-70% asebenza ngokukuko. Le chip intsha isebenzisa ithuba lobuchwephesha obenziwe yiApple yeeMacs kwaye isivumela amanqaku afanayo kwiilaptops nakwiidesktops. Ke ngoko, ngabaphuhlisi abatsha be-iPhone banokuthatha ithuba Isinyithi 2 kunye neCore ML ukwenza imidlalo, nokuba ubuchwepheshe 3D.
Ikhamera ye-iPhone ikwafumana uphuculo olubalulekileyo: sine Ikhamera ye-12 MP, ezongezwa kuzo izivamvo ezintsha iifoto zokuyila kakhulu. Kwingcaciso ephambili, iinkcukacha zamehlo omlinganiswa ophambili kwifoto zinikwe njengomzekelo, okanye umahluko omkhulu kwifoto apho eyona nto iphambili ikhanya kakhulu.
Okokugqibela, ikhamera ibalulekile uzinzo, eyayilahlekile ngokukodwa kwividiyo. Ngokukodwa kwividiyo, uPhil Schiller wakhankanya ukuba yi-smartphone eya kuthi irekhode eyona vidiyo. Iifomathi ezintsha zokurekhoda ziya kuba: 4k kwi-60 fps. kunye ne-1080 kwi-240 fps.
Ngokubhekisele kumaxabiso, asazi amaxabiso eYurophu ukuza kuthi ga ngoku, kodwa e-United States, sikhona I-iPhone 8 iqala kwi- $ 699 kwaye i-iPhone 8 Plus iqala kwi- $ 799. Musa ukuphelelwa lithemba, ukuba uyafuna, baya kufumaneka NgoSeptemba 19.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Kwaziswa i-iPhone 8 eyayiza kubonisa i-chip ye-A11 Bionic, ekhawulezayo kwii-Smartphones
Ukwanda kwenyani kuthembisa ukubulela kwi-iPhone 8 entsha
INew Apple TV 4k HDR iqinisekisiwe